Ebe nchekwa ihe nchọgharị TOR - LinuxCapable
Ihe nchọgharị TOR
Tọzdee, Disemba 28, 2021 Tọzdee, Ọktoba 28, 2021 by Jọshụa James
Tor, nke a makwaara dị ka The Onion Router, bụ ebe mepere emepe, ngwanrọ efu na-enyere nkwurịta okwu na-amaghị aha mgbe ị na-eji ọrụ ịntanetị dị ka sọfụ webụ. Netwọk Tor na-eduzi okporo ụzọ ịntanetị site na netwọk ọrụ afọ ofufo nwere ike ịnweta ihe karịrị puku relays isii ma na-aga n'ihu na-eto eto. Ọtụtụ ndị ọrụ chọrọ ịchọta ụzọ ha ga-esi dobe…
Categories openSUSE Tags megheSUSE Leap 15, Ihe nchọgharị TOR
Fraịde, Ọktọba 29, 2021 Fraịde, Ọktọba 1, 2021 by Jọshụa James
Categories Pop! _OS Tags POP! _OS 20.04, Ihe nchọgharị TOR
Wednesday, October 20, 2021 Monday, September 20, 2021 by Jọshụa James
Tor, nke a makwaara dị ka The Onion Router, bụ ebe mepere emepe, ngwanrọ efu na-enyere nkwurịta okwu na-amaghị aha mgbe ị na-eji ọrụ ịntanetị dị ka sọfụ webụ. Netwọk Tor na-eduzi okporo ụzọ ịntanetị site na netwọk mkpuchi mkpuchi afọ ofufo zuru ụwa ọnụ nke nwere ihe karịrị puku relays isii ma na-aga n'ihu na-eto eto. Ọtụtụ ndị ọrụ chọrọ ịchọta ụzọ ha ga-esi dobe…
Categories Fedora Tags Fedora 34, Ihe nchọgharị TOR
Otu esi etinye Tor Browser na Linux Mint 20
Monday, September 13, 2021 by Jọshụa James
Tor, nke a makwaara dị ka The Onion Router, bụ ebe mepere emepe, ngwanrọ efu na-enyere nkwurịta okwu na-amaghị aha mgbe ị na-eji ọrụ ịntanetị dị ka sọfụ webụ. Netwọk Tor na-eduzi okporo ụzọ ịntanetị site na netwọk mkpuchi mkpuchi afọ ofufo zuru ụwa ọnụ nke nwere ihe karịrị puku relays isii ma na-aga n'ihu na-eto eto. Ọtụtụ ndị ọrụ chọrọ…
Categories Mint Linux Tags Mint 20 Mint Linux, Ihe nchọgharị TOR
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Ihe nchọgharị TOR
Saturday, October 30, 2021 Satọde, Ọgọstụ 14, 2021 by Jọshụa James
Tor, nke a makwaara dị ka The Onion Router, bụ ebe mepere emepe, ngwanrọ efu na-enyere nkwurịta okwu na-amaghị aha mgbe ị na-eji ọrụ ịntanetị dị ka sọfụ webụ. Netwọk Tor na-eduzi okporo ụzọ ịntanetị site na netwọk ọrụ afọ ofufo nwere ike ịnweta ihe karịrị puku relays isii ma na-aga n'ihu na-eto eto. Ọtụtụ ndị ọrụ chọrọ…
Categories Nkume linux Tags Nkume Linux 8, Ihe nchọgharị TOR
Sunday, October 3, 2021 Sunday, June 27, 2021 by Jọshụa James
Categories Ubuntu Tags Ihe nchọgharị TOR, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa